Indlela yokusetha kwakhona izicwangciso kunye nomxholo kwi-iPhone yakho
Ukuba i-iPhone yakho ayisebenzi kakuhle, ungazama ukuseta useto lwakho lwe-iPhone, ethi icwangcise zonke iisetingi ze-iPhone kwindawo yayo-ngendlela eyayiyiyo xa wawukhupha ngaphandle kwebhokisi. Ukusetha useto lwe-iPhone akususi nayiphi na idatha yakho okanye imithombo yeendaba. Icala elisezantsi kuphela kukuba kuya kufuneka ubuye umva kwaye utshintshe useto kamva.
Ipilisi emhlophe e-oblong ip466
Cinezela i icon yezicwangciso kwiscreen sakho sasekhaya; emva koko ucofe Ngokubanzi → Cwangcisa kwakhona → Hlela kwakhona zonke iZicwangciso.
Lumka ungacofisi kuCima yonke imixholo kunye noseto- ubuncinci, okwangoku. Ukucima wonke umxholo kuthatha ixesha elingaphezulu ukubuyisa kwakhona (kuba ungqamaniso lwakho olulandelayo luthatha ixesha elide), ke ngoko zama ukuseta zonke iiSetingi kuqala.
Hlela kwakhona ezinye iindlela ezikhoyo kwiscreen sokusetha kwakhona, ezinje ngokuseta kwakhona iiSetingi zenethiwekhi, ukuseta kwakhona ikhibhodi yedikshinari, ukuseta kwakhona ubeko lwescreen sasekhaya kunye nokuseta kwakhona isilumkiso sendawo
Akunakulindeleka ukuba uncede, kodwa kunokuba kufanelekile ukuzama ngaphambi kokuba ubhenele ekususeni konke umxholo kunye noseto.
Ukuba ukuphinda usete zonke iisetingi ayikhange inyange i-iPhone yakho, cofa useto → Ngokubanzi → usete kwakhona → ucime konke okuqulathiweyo kunye nezicwangciso
Esi sicwangciso sisusa yonke into kwi-iPhone yakho- yonke idatha yakho, imithombo yeendaba kunye noseto. Ngenxa yokuba zonke ezi zinto zigcinwe kwikhompyuter yakho-ubuncinci, kwithiyori-kuya kufuneka ubenako ukubeka izinto ngasemva ngendlela ezazingayo ngexesha lokuvumelanisa kwakho okulandelayo. Kodwa ulahlekelwa naziphi na iifoto ozithathileyo, kunye nabafowunelwa, iminyhadala yekhalenda, kunye naluphi na uluhlu lwadlalwayo olwenzileyo okanye olutshintshileyo okokugqibela.
Emva kokucima yonke imixholo kunye noseto, jonga ukuba i-iPhone yakho isebenza kakuhle.
idosi yecenia yezinja
Ngethemba, i-iPhone yakho ibuyele kumntu wayo wakudala.
Indlela yokugcwalisa ngokuzenzekelayo kwi-iphone
ipilisi encinci emhlophe 223
I-minecraft indlela yokudaya isikrweqe
galaxy s5 kufutshane nonxibelelwano lwentsimi
I-cyproheptadine yesisindo sokufumana ubunzima